Ilaaalcha siyaasa fi qoosa Obbo Leenco Lataa. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsIlaaalcha siyaasa fi qoosa Obbo Leenco Lataa.
Obbo Leencon gidduu kana Jawar otoo hin hiikamin guyyaa lama dura Oromia 11 wajjin gaafif deebi godhani turan. Gaafif deebi kana irratti waan nama ajaa’ibu waa heddu dubbatan. Linkin kunooti.
#Gazexeessa: Waggaa 3 dura gaafa mormitootni Oromo biyyatti deebi’an hafuura gaaritu ture. Hafuura gaari sana maaltu balleesse jettu?
#L. L: Warra qabso hidhannootti deebi’etu afaanfaajji kana uume. Haalli Oromoon amma keessa jiru haala waraanatti nama geessu miti jedhen amana. Qabsoo hin feesifne irra jirra.
#Gazexeessa: Qeeroon kana dura karaa nagaatin qabsaaye jijjiirama kana fide gara waraanatti kan gale dirqameeti. Akkuma bara Dergi «ነጻ እርምጃ» jedhamu sana qeeroo mana hidhaati gadi baasani ajjeesutu jira. Mootummaan maalif hariiroo akkasi kana hordofa jettu?
#L. L: Tolchee hin beeku kana. Nama isaan morme ajjeesun amaluma mootumma Ethiopiati. (Gaafin koo as irratti mootumaan akka barbaadetti nama ajjeesu mootumma abba irreeti. Obbo Leencon maalif mootumma abba irree kana deeggara turan ree?)
#Gazexeessa: Wayyaanen waan waggaa 30 keessatti nu hin goodhin mootummaan Bilxiginna wagga 3 keessatti nu godhe. Namoota keenya qaqalii nurra ajjeese. Hammeenya Bilxiginna caala ammoo badiin Nafxanyaan nurraan geesisuf deemtutu kan Wayyaane caala nu balleesuf deema. Kanaaf tumsi barbaachise warra jedhantu jira Obbo Leencho.
#L. L: Ani kanatti hin amanu. Mootummaan Bilxiginna Wayyaane caala uummata Oromo irratti hammaata jedhe hin ammanu.
Kunoo ani asin ta’a jira miti? Bara Wayyaane tickeeta bitadhe dhufeen na ari’ani. Har’a kunoo as taa’en akkuma argitu kana akkan barbaadetti dubbacha jira.
(As irratti O/Leencon mootumma kamtu Oromof akka wayyu kan madaalan mootumma isaanif akka dhuunffatti wuleta oolen ta’u hubanna.)
#Gaazexeessa: Kunoo warri karaa nagaatin qabsa’uf galan kan akka Jawar Mohammed, Baqala Garba fi hooggantootni biroos mana hidha jiru miti? Kun abdi nama kutachiise qeeroos qabsootti galchee jira.
Warri bosona jiru illee kunoo Jawar Mohamed kan qawwee malee qabsa’uf gale hidha keessa jira. Qabsoon kara nagaa yoom isaan fayyade jechaa jiru Obbo Leenco.
#L. L. Anaaf kun qabsootti seenuf gaha miti. Warra qabsoo hidhannoo godhu caala Jawar Mohammed mana hidha jirutu caalatti qabsawa jira.
Amma dhihe jira, dukkana’us jalqabe. (Gad na lakkisi jechuu isaaniti)
#Gazexeessa: Waggootan sadan darban waaye marii poletika irratti haasawa turtan. Amma ammoo mootumman kan jecha jiru ምክክር dha male ድርድር miti kana gocha jirru jedha. Maalini garaa garumman isa?
#L. L: Ani afaan Amara tolche hin beeku. Waan ati amma jette kana tolche hiiku hin danda’u. Kana mootummadhuma gaafadhu.
Hooggantoota ABO fi KFO mana hidhaatti guurani, waajiraale isaani cufani, qobaa isaani filannoo godhatani, warra filanoodhan uummanti kuffiseef illee aangoo edda wali hirani booda Jawar mana hidha keessa taa’e qabsaawa jira jedhe qoosa hin fakkaanne qoose jira.
Akkuma bara 1991 waraana Oromo 20,000 ol moorati galchani haraka kennachiisani Oromo gabrumma waggaa 30 jalatti kuffisan har’as harka nu kennachiisu yaala jiru. Kana booda Oromoon isaanin gowwoomu yoo jiraate ykn gowwaa dha ykn seena darbe nama hin beekne. Yeroo diinni keenya amma funyaanitti hidhate Oromia seene mana nurratti gubaa jiru kanatti adabadha taa’a qabso hidhannoo hin barbaachisu nuun jechuu barbaadu.
Bara Wayyaane yeroo deebi’e sanas otoo wayyaanen haala gaarin simatte mana, konkolaata fi aangoo keeniteefi, akkuma amma kana isaanis galateeaffacha jiraata jechu dha. Yeroo amma kanatti ammoo Jawar fa balleessa tokko malee waggaa tokko caala edda hidhani booda mootumman uumataan filatame kun dhiifama godheefi gad-lakkise jira jechudhan daldala siyyaasa ittiin adeemsifata jiru. Sila otoo seerri jiraate mootummaatu isaan dhiifama gaafachu qaba ture.
Mootummaan uummatan filatames hin jiru, mootumma dimocratawa fi gara laafessa waan ta’efis gad-hin lakkifne. Qabsoo waraani Bilisumma Oromo, TDF, fi dhiibba diplomaasi biyya alaatin kan gad lakifamu danda’an.
Qabsoon itti fufa. Aluta continua.
Via: Dandana Bafkane
Marii Obbo Abdataa Suuke, Obbo Mustafaa Jaaraa fi Obbo Gurmeessaa Diddoo waliin. Kan Guyyaa Gootota…
OMN: Obbo Ibsaa Guutamaa Oromummaa fi Itoophiyummaa ኤርትራዊቷ ኢሳያስ ላይ መሰከረችበት በ6 ወር በትግራይ የፈፀመው…
Sabboonummaa irratti obbo Jawar Mohammed fi Prof. Hizkel gabbisaa maal jedhan Hedduu dubbachuun otuu hin…
Iccitii Shiraa Hogganoota ABO irratti bahu Jawar faa booda PPn oofaa jirtu